EVY's Kitchen: ကြက်ဥယို ( Homemade Kaya)
အုန်းသီးခြစ်ပြီးသားက ntuc ဘယ်အတန်းမှာ ရှာရတာလဲ ဟင်
ကြက်ဥယိုက တကယ့်လွယ်လွယ်မှ လွယ်လွယ်လေးပဲနော်...လုပ်ကြည့်ဦးမယ်..။
Homemade kaya will always taste better than store bought.
အုန်းနို့ နဲ့ ဆိုတော့ အရသာကောင်းတဲ့ပြင်မွှေးနေမှာပေါ့နော်။
စမ်းလုပ်ကြည့်ရင်တော့ကြိုက်မှာသေချာတယ်။ အုန်းနုို့ နဲ့ မုန့် တွေကြိုက်တတ်လို့ လေ။း)
kaya အရမ်းကြိုက်တယ်.. အုန်းနို့က cream ဗူး မဟုတ်ရင် ဘယ်လိုသုံးရမလဲ မသိဘူး.. ဒီမှာ အဲ့ဒါပဲ ရတယ်.. လေယာဉ်ကွင်းမှာ ဝယ်မယ်ဆိုတုန်းက ၆ဗူးဝယ်မှ ရမယ်ဆိုလို့
အုန်းသီးခြစ်ပြီးသားကလေ ကျောက်ကျောတို့၊ တို့ဟူးတို့ရောင်းတဲ့အတန်းမှာထားလေ့ရှိပါတယ်
မိုးငွေ့။ အိုင်အိုရာ၊ မီးမီးငယ် Quay Po Cooks Thanks for visiting
mae ရေအဲဒီခရင်ဗူးနဲ့ကအဆင်မပြေဘူး။ အိမ်မှာစမ်းကြည့်ပြီးသွားပြီ။ အဖတ်အဖတ်တွေဖြစ်လာလို့။
ထူးထူးဆန်းဆန်း ကြက်ဥယို လုပ်တဲ့နည်းလေး
မှတ်သားသွားတယ် Evy ရေ။ ကျေးဇူးပါနော်။
ကြုံတုန်းလေး မသိသေးတဲ့နည်းလေးတွေယူသွားတယ်း)
အမရေ မနက်ဖြန်ရုံးပိတ်ရက်ဆိုတော့ လုပ်ကြည့်ဦးမယ်
လုပ်နည်းလေးတွေ share ပေးတာအတွက် ကျေးဇူးပါနော်
အရသာလဲရှိ လွယ်လဲလွယ်တော့ ဒီနည်းအတိုင်း မဒမ်ကိုလုပ်ကျွေးဦးမှ ကျေးဇူးပါဗျာ
အဲလိုတော့ ပြောသွားတာပဲ စံပယ်ရေ။ ရအောင်သာလုပ်ကျွေးခိုင်း။ ခုတစ်လော ညီမကိုမတွေ့တာကြာပြီ။ အစ်မက ညီမဘလော့ကိုတော့ရောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကဗျာကိုသိပ်မခံစားတတ်လို့ ကွန်မန့်မပေးသွားတာပါ
Eve, can pls share what is the cocunut cripy look like?
i am so interested to try this on coming weekends.
NTUC က အုန်းသီးအထုပ်ကိုမေးတာလားဟင်?
yes, it is from ur recipes list.
"အုန်းသီးခြစ်ပြီးသား" what does it look like?
where is it placed from NTUC ?
PS : pls don't mind for MM typing :P
(don't know how to type :D )
အုန်းသီးခြစ်ပြီးသာ အထုပ်ကိုအင်တာနက်ကရှာပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီ အုန်းသီးကလေ ခေါက်ဆွဲအစိုတွေဘာတွေ ရောင်းတဲ့နေရာနားမှာရှိတယ်။
i found it, will try this recipe :P
ကျေးဇူးပဲနော် ။ မုန့်ဖုတ်သင်တန်း တက်မိပြီး အိမ်မှာ စမ်းလုပ်ကြည့်နေတာ ပေါင်မုန့်တောင် တူအောင်မလုပ်နိုင်သေးလို့ အားမရဘူး ။ မမျှော်လင့်ဘဲ ဒီ နေရာလေးကို ရောက်လာပြီး လေ့လာခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
အင်တာနက် ကို ဆိုင်မှာ တစ်ခါတလေမှ သုံးနိုင်တာမို့ ပို့စ် တချို့ ကူးယူသွားပါတယ် ။